မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်ပြီးကတည်းက အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံကြုံတွေ့ရပြီး ရေးစရာတွေအများကြီးရှိနေပေမယ့် မီး-နက်ပြဿနာတွေကြောင့် အီးမေးလ်တောင်အနိုင်နိုင်ဖွင့်နေခဲ့ရပါတယ်။ ခုတော့ ကြိုးမဲ့အင်တာနက်သုံးလို့ရတဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေ သိလာလို့ ဘလော့ဂ်လည်းဖွင့်လို့ရလာ၊ နည်းတွေသိလာပြီမို့
Posted by Dr. Nyan at 10:00 PM
ဖတ်ဖို့ စောင့်မျှော်လျှက်ပါ ဦးဥာဏ် ... !
wellcome.We are waiting to read.
Omachi shite orimasu.....